Deadpool ~ The ICT.com.mm Blog
Marvel Comics ရဲ့ anti-hero တစ်ယောက်ဖြစ်သလို၊ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ mercenary တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ Deadpool ကို main character အဖြစ်ကိုင်တွယ်ရမည့် Action ဂိမ်းသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Deadpool ရဲ့တစ်ကိုယ်တော်ဂိမ်းသစ်မှာ Cable နှင့် Wolverine လို နာမည်ကျော် Marvel Comics ဇာတ်ကောင်တွေ ပါဝင်မှာဖြစ်သလို Katana နှင့် pistol တို့အပြင် အခြားရယ်စရာ လက်နက်တွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
About Nay Aung Latt
အမည်ရင်းမှာ နေအောင်လတ်ဖြစ်ပြီး Myanmar ICTတွင် Game Animation/ PC Game များအကြောင်းကို ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။	View all posts by Nay Aung Latt →
Newer အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ သေကြမယ်
Older အနာဂတ်ရဲ့ ဖန်တီးရှင်
Genre - Action Puzzle Portal လိုမျိုး first person viewpoint ကနေမြင်ရပြီး puzzle တွေပါဝင်တဲ့ action puzzle ဂိမ်း Magrunner: Dark Pul...
The Night of the Rabbit ဂိ​မ​်း​သစ်ဟာ Point & Click Adventure ဂိ​မ​်း​အမျိ​ုး​အစား​ြ​ဖ​စ​်​ြ​ပီး စကား​ေြ​ပာ​တ⁠တ​်​ြ​ပီး ေ​မှာ​်​အစ...
Developer Neocoreရဲ​့ Action RPG ဂိ​မ​်း​သ​စ​် The Incredible Adventures of Van Helsingမှာ ကစား​သူ​ဟာ Dracula ဇာတ်လ​မ​်းများ​မှ Monster...
Horror ဂိ​မ​်းြ​ဖစ်တဲ့ Annaကို Mission အသ​စ​်ေ​တွ ထ​ည​့်​ထား​သ​လို Graphics ပို​င​်း​မှာ အဆ​င​့်ြ​မ​င​့်​တ​င​်ေ​ပး​ထား​တဲ့ Anna - Exten...
SEGA ဂိမ်းကုမ္ပဏီရဲ့ ထုတ်ကုန်အသစ် Real-Time Strategy ဂိမ်း အမျိုးအစား တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Total War: Rome Iကို Preview လေ့လာ ကြည့်လိုက်မယ်ဆ...
အခုနောက်ပိုင်း Animation Series တွေမှာ Seasonအသစ်တစ်ခုစတိုင်း Musical Series သို့မဟုတ် ဖျော်ဖြေ ရေး Idolအဖွဲ့တွေရဲ့ ဇာတ်လမ်း လေးတွေ အမြ...
Call of Juarez Gunslinge
၁၈၈၀ ခုနှစ်လောက်က စတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ ပြဿနာတစ်ခု ကြောင့် STINKING SPRINGSဆိုတဲ့ လူဦးရေအနည်းငယ်ရှိတဲ့ မြို့လေးမှာ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်နေ...
Modify ပြုလုပ်ထားသည့် ဂိမ်းစက်များ ဈေးကွက်တွင်း ပြန်လည် ၀င်ရောက်လာ
Modify ပြုလုပ်ထားသည့် ဂိမ်းစက်များ အဖြစ် Play Station3ဂိမ်းစက်များ ပြည် တွင်း ဈေးကွက်တွင်းသို့ ပြည်လည် ၀င် ရောက်လာကြောင်း ဂိမ်းစက် အ...